फिक्सन : पेन्सिल : RajdhaniDaily.com
Homeभर्खरैफिक्सन : पेन्सिल
बिहानी खासै खुलिसकेको छैन । हिजोदेखि धुर्मैलो आकाश मन्दमन्द निन्यारो छ । केटाकेटीका कल्याङबल्याङ अलि चर्कै सुनिइरहेको छ ।
‘मम्मी भरे स्कुलबाट फर्केपछि पेन्सिल किन्दिनु है !’ झन्डै ६ वर्ष टेक्न लागेका अनुज आफ्नी आमासँग लाडे पल्टिँदै छ ।
उसकी ‘मम्मी’ भान्छातिर व्यस्त छिन् । छोरोको झिनो आवाज सुनिइरहेकी सुनिती हल्का झर्किएझैं गर्छिन्,
‘फेरि पेन्सिल, हिजोको खै त ?’
अनुज टाउको कन्याउन थाल्छ । अनि, ठुस्स पर्छ । छोरोको निन्याउरो अनुहारले सुनितीको मातृहृदय क्षणभरमै पग्लन्छ ।
‘हुन्छ बा हुन्छ, भरे दुईटा पेन्सिल किन्दिउँला, हस् !’ हातमा काइँयो लिएकी सुनिती छोरोछेउ जानेक्रममा भन्छिन् । अनुजलाई च्याप्प काखी च्यापेकी उनी छोराको कपाल कोर्न थाल्छिन् ।
लेखक : युमाश शेर्पा
‘इरेजर पनि है…मम्मी !’ अनुज फुरुंग पर्छ ।
‘हुन्छ बा हुन्छ,’ सुनिती छोरोको इच्छा आत्मसात गर्छिन् ।
घरभित्र चारैतिर दौडिरहने अनुज तीन कक्षमा पढ्छ । सानै छ, तर बुझक्कड छ । नजानेको सोध्छ । धेरै खोज्दैन, सानै चीजमा पनि रमाउँछ ।
‘मम्मी, इसुल जान ढिला भइसक्यो,’ कलिलो ओठ गोलो पार्दै अनुज हतारिन थाल्छ । ऊ आमालाई बारम्बार सचेत गराइरहेको छ । सुनिती बिहानी धन्दामै व्यस्त छिन् ।
हिजोअस्ती सखारै चर्किसक्ने घाम आज धुर्मैलोको धुर्मैलै छ । निला आकाशमा बादलका काला धब्बा झन्झनै मडारिँदै छ । याम गर्मीको भए पनि वातावरण चिसो छ ।
‘छोरो यो लगाऊ बा, आज चिसो छ,’ दराजबाट सूइँटर झिक्दै गरेकी सुनिती भन्छिन् ।
‘नाई…भरे गल्मी (गर्मी) हुन्छ,’ अनुज सूइँटर लगाउन मान्दैन ।
सुनिती पनि खासै कर्कर गर्दिनन् । उनी छोरोको ‘नाई’मै खुसी हुन्छिन् । सूइँटर दराजमै थन्किन्छ ।
‘होम्मर्क सबै ग-यौं त ?’ छोरोको स्कूलब्याग थपथपाउँदै सुनिती सोध्छिन् ।
‘गरिसकें…’ दूध पिउँदै गरेका अनुज एकै सासमा भन्छ ।
आज छोरोप्रति सुनितीभित्र बेग्लै अनुग्रह छताछुल्ल भइरहेको छ । हिजोअस्ती यस्तो अनुभूति भएको थिएन । आज किन हो कुन्नी ? उनलाई मायालु छोराका सबै शब्द प्रिय र स्वीकार्य लागिरहेको छ ।
‘अनुज, इस्सुल जाने हैन ?’
बाहिर ढोकैबाट उसका साथी चिच्याइरहेका छन्,
कलिला नानीका सामूहिक आवाज एकसाथ भित्रतिर हुर्रिन्छ । स्कूल झोला बोकेका उत्साहित अनुज साथीहरू भएतिर दौडियो ।
‘ए…विस्तारै…लड्छ,’ सुनिती पनि छोरोको पछिपछि लाग्छिन् ।
‘मम्मी, गाडी कतिखेर आउँछ ?’ (अनुज)
साथीहरूको आड पाएको अनुजलाई ‘स्कूल कहिले पुगुँला ?’ भएको छ ।
‘आइहाल्छ नि, किन आत्तेको ?’ सुनिती छोरोप्रति आलादित सुनिइन् ।
उनलाई आज छोरो स्कूल पठाउने उत्ति मन मानिरहेको छैन । तर, अनुजको ‘स्कूले रहर’ पन्छाउन सक्ने हिम्मत पनि त छैन, उनमा ।
‘बाबु, आज स्कूल नजाऊ न हुन्न !’ सुनितीले बल्ल वाक्य झारिन् ।
‘किन मम्मी ? नाई म त जान्छु,’ अनुज मान्दैन ।
स्कूल जान तम्तयार नानीहरू गाडी आउने बाटोतिर आँखा तन्काइरहेका छन् । सधैंजसो बिहानीपखको बाटो उनीहरूकै कारण फुलबारी बन्ने गर्छ । उनीहरूको उपस्थितिमा बगैंचामा रंगीविरंगी फुल झुम्मिरहेको प्रतीत हुन्छ । सिनवारी गाउँ उनीहरूबिना शून्य र निशाचर लाग्छ पनि ।
‘दिदी, यिनीहरू स्कूल गएपछि त गाउँ नै शून्य हुन्छ है !’ सुनितीकी छिमेकी बहिनी पार्वती नानीहरूतिर हेर्दै भन्छिन् ।
‘त्यही त,’ सुनिती मन्द हाँस्दै बोलिन् ।
‘दिदीलाई सञ्चो छैन कि क्या हो ?’ निधारमा हात राखिरहेकी सुनितीतिर हेर्दै पार्वतीले सोधिन् ।
‘अँ…अलि सञ्चो नभएजस्तो भइरहेको छ,’ नाक सुक्कसुक्क पार्दै सुनिती बोलिन् ।
‘आज यिनीहरूलाई लिन आउन नि कति ढिला गरेको हो ?’ पार्वतीले प्रसंग मोडिइन् । अनुजतिर हेरिरहेकी सुनिती मौन देखिन्छिन् ।
पर्तिरबाट बल्ल एउटा टेम्पो आउँदै गरेको देखिन थाल्यो ।
‘पहिल्यै भरिसकेको टेम्पोमा अब कति पो नानी अट्लान् र ?’ भरिभराऊ टेम्पो देखेर गाउँलेको मनमा चिसो पस्छ । सुनितीभित्र पनि बेग्लै चिन्तन र चिन्ता मडारिरहेका छन् ।
‘मम्मी गाडी आयो,’ अनुज उफ्रिँदै रमाउन थाल्यो ।
‘गाडी आयो, गाडी आयो’ भन्दै अरु नानी पनि झोला उचाल्दै खुसी भए ।
टेक्पो छेउमै आइपुग्यो । स्कूले नानी मुखामुख गर्न थाले, ‘कहाँ कसरी बस्ने ?’ उनीहरूलाई कोचकाच पारेर टेम्पो हुइँकिन्छ ।
सुनिती टेम्पो ओझेल नपरिञ्जेलसम्म हेरिरहन्छिन् । टेम्पो देख्न छोडेपछि रित्तो मन लिएर उनी घरभित्र पस्छिन् ।
‘ओ…हो, यो यहीँ बिर्सेर गएछ,’ अनुजले टेबुलमाथि नै बिर्सेर गएको पेन्सिल टाछ्ने कटर देखेर सुनिती बर्बराइन् । हत्त न पत्त उनी बाहिर आउँछिन् । टेम्पो गएतिर नजर फाल्छिन् । धुलौटे बाटो फगत शून्य छ ।
‘दिदी…दिदी…’ सुनिती घरभित्र के छिरेकी थिइन् । अनायासै पार्वती आत्तिएको सुनिइन् । हड्बडाएकी पार्वती देखेर सुनिती रनभुल्लमा परिन् । उनले ठ्याक्कै ठम्याउनै सकिनन्, आखिर के भयो ?
‘दिदी…टेम्पो !!!’ पार्वती बोल्न सकिनन् । अवाक उनी थचक्क बस्न पुगिन् ।
क्षण भरअघिको सुन्दर सिनवारी गाउँ कोलाहलमा बद्लिन्छ । चारैतिर दौडधूप सुरु हुन्छ । ‘कहाँ के भयो ?’ कसैले भेउ पाउनै सकिरहेका छैनन् ।
‘स्कूलको टेम्पो नहरमा खस्यो रे !’ गाउँभर खल्याङबल्याङ मच्चियो ।
सुनितीको छात्ति ढक्क फुल्छ । थुचुक्क परेकी पार्वती विस्तारै उठ्न खोज्छिन् ।
‘अनुज…’ दबिएको आवाज सुनितीबाट निस्कन मुश्किलै पर्छ । छोरोको मायालु आवाज र अनुहार आँखाभर नाच्न थाल्छ । चिन्तित तरेली मनमा तरंगिँदै छन् ।
‘बाबु…’ अश्रुधारा बगाउँदै अनुजका बुबा विकास पनि देखापरे । उनी युद्धमा पराजित सिपाइँझैं निरीह छन् ।
सर्वत्र सन्नाटा । शोकमा डुबेको छ, सिंगो सुनवल गाउँ । बगैंचाका प्रसून पनि मुर्झाएका छन् । हाँसोका पंख फट्कार्ने नानीहरूका खुसी क्षणभरमै विलिन भएको छ । टेम्पोमा सवार १३ निर्दोष उनीहरू एकै चिहान भएका छन् ।
बोली फुट्न सक्दैन । आँट पोलिरहेको छ ।
‘अन्याय भो, अति नै भयो, दोषीमाथि कारबाही गर,’ फरार टेम्पो चालकलाई कारबाही माग गर्दै गाउँ उर्लेको छ ।
निकै समयदेखि घोप्टो परेकी सुनितीले आफ्नो शिर उठाउन सकिरहेकी छैनन् । भित्तामा टाँगिएको अनुजको मुस्कानी तस्बिरले हृदय छियाछिया पारिरहेको छ । सुनितीको कानमा अनुजका अन्तिम वाक्य बारम्बार गुञ्जिरहेकै छ, ‘मम्मी भरे स्कुलबाट फर्केपछि पेन्सिल किन्दिनु है !’
जेलबाट छुटाइदिन्छु भन्दै साँढे छ लाख लिएपछि…
इलाम । इलामका एक व्याक्तिले मानब बेचबिख अभियोगमा जेल परेकालाई जेलबाट छुटाइदिन्छु भन्दै साढे छ लाख रुपैयाँ ठगेका छन् । अनेरास्वबीयूका केन्द्रिय सदस्य समेत...
नुवाकोटकी छात्रा सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय पाठक